USA တွင်ကျန်းမာရေးအာမခံ | USAHello ထံမှကနျြးမာရေးအရင်းမြစ်များ | USAHello
ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးရုံကို Going USA တွင်ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်ကျနိုင်ပါတယ်. ကနျြးမာရေးအာမခံရှိသည်ဖို့အရေးကြီးတယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ. မတူညီသောကျန်းမာရေးအာမခံအမျိုးအစားနှင့်သင်မည်သို့ကျန်းမာရေးအာမခံရနိုင်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
Medicare ကိုအမေရိကန်အစိုးရကဖွင့်တဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. Medicare အားလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်အရွယ်မှရရှိနိုင် 65 နှင့်အထက်အပေါင်းတို့နှင့်အသက်အရွယ်မရွေးမသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများမှ. Medicare ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကူညီမယ့်အစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်း. Medicare အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
the Children ရဲ့ကနျြးမာရေးအာမခံအစီအစဉ် (CHIP) အနိမ့်အဘို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ချေ- ကလေးငယ်များနှင့်အတူအလယ်အလတ်ဝင်ငွေမိသားစုများ. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သားသမီးရဲ့ဆရာဝန်ချိန်းနှင့်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုအဘို့အချေသောကြောင့်, CHIP ကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒုက္ခသည်မိသားစုများနှစ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများ-ups အဘို့နှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းများအတွက်ဆရာဝန်မှသူတို့သားသမီးယူရန်အဘို့အဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်၏ CHIP အစီအစဉ်ကိုရှာရန်.
သငျသညျအနိမ့်ဝင်ငွေဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးကလေးရှိပါက, ဒီအကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. WIC အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါနှင့်သင့်ပြည်နယ်၏အဘို့ရှာဖွေ WIC အစီအစဉ်ကို.
အဆိုပါစျေးသက်သာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေ (ACA), လည်းခေါ် “ObamaCare,” ကျန်းမာရေးအာမခံရှိသည်ဖို့အရှိဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ဥပဒေရေးရာနေထိုင်သူများလိုအပ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်လည်းအစိုးရဆီကအကူအညီဖြင့်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်တို့ကိုခွင့်ပြု. သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ကြည့်ရှုပါ အဆိုပါစျေးသက်သာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေအောက်မှာလွှမ်းခြုံရ.